Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ndị mmekọ Italiantali na-enweta ozi njem ọhụrụ site na Seychelles
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Seychelles na-anabata ndị njem si Ịtali
Ichekwa Seychelles n'uche maka ahia njem Italytali, Onye isi nchịkwa Seychelles nke njem nlegharị anya maka azụmaahịa ebe Bernadette Willemin kpọbatara ụfọdụ ndị mmekọ isi ebe ahụ na Rome na mmemme nri ehihie emere na Nọvemba 18, 2021.
Ịchịkọta ndị nnọchiteanya sitere na azụmaahịa gụnyere ndị na-eme njem nlegharị anya, ndị mmekọ ụgbọ elu na ụfọdụ ndị otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi pụrụ iche, Oriakụ Willemin na Njem nlegharị anya Seychelles Onye nnọchi anya Italy, Danielle Di Gianvito, kesara ozi emelitere gbasara ebe a na-aga iji gbaa ndị njem ume na Seychelles na-esochi mwepụ nke ihe mgbochi maka ndị ji “Green Kaadị” mgbe ha laghachiri Italy dị irè kemgbe Ọktoba 2021.
Ndị ọbịa Italiantali, onye nwere ike iru Seychelles ugbu a site na paspọtụ njem nlegharị anya n'efu nke COVID-19 nke ụlọ ọrụ njem na ndị na-ahụ maka njem na-ahazi, ugbu a ga-eweta nsonaazụ PCR na-adịghị mma nke emere awa 48 tupu ịlaghachi azụ.
N'ịgosipụta ihe ọhụrụ na Seychelles n'ihe gbasara nnweta ngwaahịa ndị a na-enye, Oriakụ Willemin gosipụtara mmeghe nke ọtụtụ ihe ọhụrụ na imezigharị ndị ọzọ maka nkasi obi nke ndị ọbịa, na inye ha ohere izute ihe dị iche iche chọrọ na mmefu ego.
Ihe na-akpali akpali na-arụ ọrụ, Oriakụ Willemin gwara ndị mmekọ, ya na ndị na-ahụ maka ọrụ na Seychelles na-arụ ọrụ ugbu a na atụmatụ ọhụrụ iji gbanwee ngwaahịa ahụ; ndị a na-agụnye njem nlegharị anya ahụmahụ iji mee ka ndị ọbịa nwee mmekọrịta chiri anya na eziokwu mpaghara na mmepe nke njem njem na-adịgide adịgide.
Ọ bụ ezie na Seychelles na-aga n'ihu na-edebanye aha ndekọ dị mma na ọnụọgụ mbata nke afọ a, na-abawanye ihe karịrị 39% ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ na 2020; ọ dị mkpa ịbawanye visibiliti nke ebe aga, ọkachasị ndị mmekọ ahia, Oriakụ Willemin kọwara.
"Atụmatụ anyị maka Ịtali, dị ka ọ dị na ahịa ndị Europe ndị ọzọ, bụ ịkụ aka mgbe ígwè ka na-ekpo ọkụ. Site na mmachi ndị gọọmentị Italy welitere n'oge na-adịbeghị anya, ọ bụ oge kwesịrị ekwesị ka anyị gwa ndị mmekọ anyị okwu ma tinye Seychelles n'ọkwa. Ebumnobi anyị ugbu a bụ iji nwayọọ nwayọọ weghachite Italytali n'etiti ahịa ahịa Seychelles dị ka ọ na-ebutebu ọrịa na-efe efe" Oriakụ Willemin kwuru. Iji mara na Italy bụ nke anọ na-eduga isi iyi njem nlegharị anya na 2019, mgbe ndị ọbịa 27,289 si Italy họọrọ ezumike n'agwaetiti paradaịs nke India.
Ebe kachasị amasị ndị Ịtali, Seychelles na-edepụta ndepụta ebe ezumike chọrọ karịsịa n'oge ekeresimesi na ezumike oyi. Ka oge na-abịaru nso, ndị otu ahụ ga-ewusi usoro ahịa ahịa ya ike na ahịa Ịtali iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa si Ịtali na-abawanye, Oriakụ Willemin gwara ndị bịaranụ.
N'igosi akara ngosi dị ịrịba ama nke mgbake nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ya, Seychelles edekọla ndị ọbịa 146 maka oge nke Jenụwarị 721 ruo Nọvemba 1 14. Site na ngụkọta nke ndị ọbịa 2021 dekọrọ afọ ruo taa, Italy nwere atụmatụ n'etiti ahịa isi mmalite 1,659 zuru ụwa ọnụ maka Seychelles n'afọ a.